Waxsansheeg News - Habboonaanta Habboon ee Hab-Dhaqanka ah
Dib-u-Habboonaynta Habitat Habboon
Markii aad guri u sameysatid saaxiibkaaga reptilian-ka cusub waxaa muhiim ah in terrarium-kaagu uusan u ekaanin kaliya jawigaaga dabiiciga ah, wuxuu sidoo kale u dhaqmaa sidii oo kale. Cayayaankaagu wuxuu leeyahay baahiyo bayooloji oo gaar ah, hagitaankan ayaa kaa caawin doona inaad dejiso hoy ku habboon baahiyahaas. Aynu u helno abuurista boos ku habboon saaxiibkaaga cusub talo soosaar leh.
Baahiyaha Aasaasiga ah ee Deegaankaaga
Hoyga weyn ayaa had iyo jeer la doorbidayaa. Degmooyinka waaweyni waxay kuu oggolaanayaan inaad dejiso heer kulka firfircoon oo firfircoon.
Waxyaabaha iska soo celiya waa xayawaan dhiig qabow qaba, sidaa darteed ma awoodaan inay iyagu iskood u habeeyaan heerkulka jirkooda. Tani waa sababta il kululaynta ay muhiim u tahay. Inta badan waxyaalaha xaraashka waxay u baahan yihiin heerkul joogto ah oo u dhexeeya 70 illaa 85 digrii F (21 illaa 29)℃) oo leh meelaha ugu hooseeya ee gaadha inka badan 100 darajo F (38)℃). Nambarkan wuxuu ku kala duwan yahay nooc kasta, waqtiga maalinta iyo xilliyada.
Aalado badan oo kuleyl celcelis ah oo ay ka mid yihiin nalalka, suufka, kululeeyeyaasha tuubbada, kuleyliyaasha hoostiisa, walxaha kuleyliya dhoobada iyo nalalka basaska ayaa la heli karaa si loo habeeyo jawiga kuleylka ee alaabadaada cusub.
Waxyaabaha lagu yaqaan "Basking" ee xayawaanku waxay u soo guuraan oo ka baxaan qoraxda si ay u helaan kuleylka ay u baahan yihiin, taas oo ah qaabkooda kuleylka. Nalalka weelka ka samaysan ee hal dhamaadka dhulkooda ayaa siin doona xayawaankaaga rabaayadda heer kulka ah oo u oggolaanaya inay u helaan kuleylka ujeeddooyin dheef-shiideed iyo meel qabow oo loogu talagalay hurdada ama nasashada.
Hubso in heerkulka ammuurkiisu hooseeyo uusan ka hooseyn hoose-hoose ee heerkulka xayawaanka ugu fiican xitaa iyadoo ay jiraan nalalka oo idil. Waxyaabaha kululeynta ee ceeramka iyo kuleyliyaasha haanta kuleylka ayaa faa'iido leh maxaa yeelay waxay ilaalinayaan kuleylka iyadoon loo baahnayn inay nalka sii hayaan 24-ka saacadood maalintii.
Waxay kuxirantahay xarafka aad haysato, waxay u baahan karaan qadaryo kala duwan oo qoyaan ama waxay u baahan karaan habab kala duwan oo loo adeegsado sidii loogu soo bandhigi lahaa qoyaanka deegaankooda. Tropical Iguanas iyo noocyada kale ee la midka ah waxay u baahan yihiin heerar qoyaan badan si ay u ilaashadaan caafimaadkooda. Noocyo badan oo kala jaad ah oo loo yaqaan 'Chameleons' waxay ku tiirsan yihiin dhibco dhibco biyo ah caleenta ama dhinacyada degaanadooda inay cabaan halkii ay biyuhu taagnaayeen. Nooc kasta waxay leedahay doorbido markay qoyaan tahay, sidaa darteed la soco noocyada qoyaanku xayawaanku u baahan doono iyo qalabka aad u baahan tahay inaad siiso.
Heerarka qoyaanka waxaa xukumaa hawo, heerkul iyo soo gelitaanka biyaha jawiga. Waxaad kor ugu qaadi kartaa heerka qoyaanka adigoo ku buufinaaya biyo si joogto ah biyo ama adoo siinaya il biyo ama biyo socda. U isticmaal qalabka 'hygrometer' ee deegaanka xayawaankaaga ku jira si aad ula socotid huurka. Waxaad ku ilaalin kartaa heerka ugu habboon ee kuleylka gurigaaga xayawaankaaga ah adoo adeegsanaya hawo-maroojiyeyaal ganacsi laga heli karo, qalabka qalqallooca iyo aaladda. Goobaha-biyo-qabadyada yar-yar ee guryaha lagu qurxiyo ayaa sii kordhaya caan, ma aha oo kaliya inay ku daraan xiisaha ku-saabsan aasaaska vivarium, laakiin sidoo kale inay bixiyaan heerar ku habboon oo qoyaan ah.
Laydhku waa shay kale oo si weyn ugu kala duwan noocyada noolaha. Lizards, sida Libaaxyada Wadajirka ah iyo Green Iguanas, waxay u baahan yihiin xoogaa iftiin gaar ah maalin kasta, halka kuwa aan duuliyaha lahayn ay u baahan yihiin iftiin aad u yar.
Noocyada isweydaarsiga waxay u baahan yihiin laambado gaar ah, meeleeyn sax ah iyo xitaa nalalka qaaska ah. Waxay u baahan yihiin fiitamiin D3, oo sida caadiga ah ay ka helaan qorraxda tooska ah. D3 waxay ka caawisaa liintaada yar yareynta kaalshiyamka. Nambarka guryaha ee caadiga ah ma bixin karaan tan, sidaa darteed iska hubi inaad heshid guluubka gaaska. Cayayaankaagu wuxuu u baahan doonaa inuu dhex maro ilaa 12 inji hal inji. Hubso inay jiraan caqabad looga hortago khatarta gubashada.
Xiirashada qoryaha kedarka & geed
Xirmooyinkan waxaa ku jira saliidaha u dhibi kara maqaarka qaar ka mid ah waxyaalaha xamaasha, mana haboona.
Nalalka kuleylka leh waa in had iyo jeer lagu dhejiyaa meesha korkeeda ama daboolka mesh markaa majirto qatar dhaawac soo gaarta.
Xawaaraha & dhagaxyada
Haddii aad hesho oo aad rabto inaad u isticmaasho gabal qallalan ama dhagax weyn oo dhulkaaga ah, hubi inaad qaado taxaddarrada habboon. Waa inaad qortaa dhammaan waxyaabaha loo yaqaan 'blec / naloollo biyo ah' muddo 24 saac ah. Marka xigta, ku qoy biyo nadiif ah 24 saacadood oo kale si aad uga nadiifiso biliijka. Weligaa waligaa ha dhigin wax alaab ah oo laga helay bannaanka hore ee gurigaaga maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in ay ku jiraan harooyin halis ah ama bakteeriya
Filter looma baahna terrarium-ka, laakiin waa qayb lagama maarmaanka u ah vivarium ama galka biyaha. Waxaad u baahan doontaa inaad si joogto ah u beddesho si aad uga saarto bakteeriyada iyo sunta kale ee ku samaysata biyaha ama shaandhada lafteeda. Akhri qoraalka isla markaana qoro goorta la beddelayo shaandhada. Haddii biyuhu u muuqdaan inay wasakh yihiin, waa waqtigii isbadal.
Qoryaha nool waa inaan waligood loo istcimaalo qurxin xayawaan ahaan. Dheecaanku wuxuu waxyeelo u geysan karaa xayawaankaaga. Iyada oo leh deegaanno biyo-ama-biyo-ama-biyaha ah, dheecaanku runtii wuu sumayn karaa biyaha. Marna ha u isticmaalin walxaha aad ka soo heshay bannaanka gurigaaga xannibaada.
Sheyga birta ah waxaa sida ugu fiican looga ilaaliyaa meelaha dusha sare ah, gaar ahaan biyaha cimilada, biyaha-biyaha-ama biyaha qoyan. Birta culus sida naxaasta, zinc iyo sunta rasaasta ayaa sun ah waxayna gacan ka geysan karaan in si tartiib ah loogu sumoobo xayawaankaaga.
U raadinta dhirta dhirta terrariumkaaga waxay noqon kartaa mid aad u adag. Waxaad dooneysaa inay u ekaato mid dabiici ah, laakiin wax walba oo aad rabto ayaa ah inay amaan noqoto. Dhirta badan ayaa sun ku ah xayawaankaaga rabaayadda ah waxayna sababi karaan jawaab celin meelkasta oo ah cuncun yar yar ilaa dhimasho. Weligaa haku isticmaalin geedka bannaanka inaad u qurxisid aqal-dejiyeyaasha.
Calaamadaha geedka ayaa sababa xasaasiyad xasaasiyadeed
1.Gudud, siiba afka agtiisa
2. Dhibaatooyinka neefsashada
Haddii aad aragto mid ka mid ah calaamadahan, u qaad xayawaankaaga dhaqtarka xoolaha isla markaaba. Jawaab-celintaani inta badan waa mid nafta halis gelisa.
Kuwani waa qodobbada aasaasiga ah ee kaa caawin doona inaad guri uga dhigatid saaxiibkaaga kululeynta ah ee cusub. Xusuusnow nooc kasta wuxuu leeyahay baahiyo kaladuwan, iyo sida waalid xayawaan rabaayad ah waxaad u baahan doontaa inaad siiso wax kasta oo ay ugu baahan yihiin inay ku noolaadaan cimri dheer, nolol caafimaad leh. Hubso inaad baartid baahiyaha gaarka ah ee noocaaga xannibaadda oo u keen su aalo kasta oo aad u baahan tahay takhtarka xoolaha.
Waqtiga boostada: Jul-16-2020